Sarafan 'ny 2018 - lamaody lamaody, fahavaratra, jeans, hoditra, chiffon, tora-pasika, cage, lava, fohy, tsy miolakolaka, mitontona floral, ho feno
Sarafana amin'ny 2018 - lamaody amin'ny lamaody - modely mahafinaritra ho an'ny endrika hafa
Amin'ny vanim-potoana mafana, ny lamba fitafiana misokatra dia vahaolana tsara indrindra ho an'ny fampiononana sy ny asany amin'ny sary. Ny iray amin'ireo zavatra malaza indrindra sy tsara tarehy ao am-patana dia akanjo maivana maivana. Ary mba hanarahana ny fironana farany, dia mendrika ny hamerina hijery ny fanavaozana ny sarafana amin'ny 2018 - lamaody lamaody.
Amin'ny vanim-potoana vaovao dia manandrana manandrana fanandramana amin'ny fisafidianana ny fitaovana ireo mpanamboatra. Rehefa nomena tombo-kafaham-bolo ny totozy, avelao ny rivotra ary asongadino ny endriky ny vehivavy, ny vokatra malaza indrindra dia ny sehatra, dantelina, proshov, rongony ary kibony tsara. Ao anatin'izany fatrany izany dia mora ny mifidy fomba maoderina ho an'ny akanjo isanandro , ary koa ho an'ny tora-pasika na asa. Andao isika hanao famerenana - fandroana amin'ny fotoam-pialan-tsasatra 2018 amin'ny fahavaratra:
Asymmetric . Fombafomba tsy fetezana tsy fetezana - tandindona mampiavaka sy tsy mahazatra. Ho an'ny akanjo lamaody amin'ny fahavaratra, ny fandroana asymmetrika dia heverina ho vahaolana tena izy.
Amin'ny flounces . Ny fanampiana malaza, izay mahatonga ny famolavolana ny vehivavy, ary ny sary amam-panahy, dia mitoetra ho lava be dia be eo amin'ny tsipika tapa-damba, ny sisiny farany na ny banga.
A silhouette napetraka . Ny fahamendrehana sy ny fahasoavana eo amin'ny sary dia hanampy amin'ny fanamafisana ny fomba izay mampiavaka ny tady. Afaka manitsy ny endrika tsy miangatra koa ny fehin-koditra iray, manasongadina ny maha-vehivavy ny silhouette sy ny marevaka ny tsipika.
Famaritana sanga . Ny tsara indrindra dia ny modely traikefa maimaim-poana. Ity safidy ity dia manan-danja amin'ny làlana rehetra - mini, midi, maxi. Ary manampy toe-javatra iray hanampy hanapaka ny satroka, misokatra, rakitra lalina.
Ao amin'ny fomba lamba lamba . Ny lamaody mody dia vokatra marevaka sy marevaka vita amin'ny landihazo, kisary na seza amin'ny lela somary matevina. Ireo akanjo ireo dia lasa safidy manerantany ho an'ny isan'andro, eny an-dalam-pivoarana sy eny fa na dia ny tsipiriany aza.
Ny modely avy amin'ny denim dia heverina ho iray amin'ireo vahaolana malaza indrindra isan'andro. Ny fahamendrehana sy ny faharetan'ny fitaovam-behivavy dia hiantoka ny asan'ny tsipika isanandro. Na izany aza, zava-dehibe ny mitadidy fa ny vokatra amin'ny tapa-tavoahangy tsara sy mazava dia mety amin'ny hafanana. Ny sarina jeans maoderina indrindra amin'ny 2018 dia aseho amin'ny fohy sy maoderina. Ny fironan'ny vanim-potoana vaovao dia ny fomba amam-pihetsika matanjaka amin'ny bokotra metaly. Ao amin'ny lamaody amin'ny lamaody amin'ny akanjo maranitra maromaro sy ny fomba fijery vehivavy kokoa amin'ny fifampikasohana lamosina.
Hiditra ao anaty tranokala 2018
Ao amin'ireo fanangonana vaovao, ireo mpahaikanto dia manantona ny lazan'ny modely tsara tarehy sy marevaka miaraka amin'ny tranom- bokotra geometric print . Sarafana amin'ny lamaody lamaody amin'ny 2018 - fialantsiny amin'ny motif kely sy lehibe. Modely ampiasain'ny mpanazatra ny karazana fandikana ny printy - avy amin'ny tranonkala mahazatra sy ny fomba ofisialy ao amin'ny paoma goavana. Raha mifanitsy amin'ny lala-masony ny sarin'ny andavanandro, dia mendrika ny hipetraka amin'ny modely misy loko mifanohitra. Mendri-piderana sy mampihetsi-po kokoa ny akanjo miaraka amina shadow - amin'ny tonony samihafa palette iray.
Sarafany hoditra 2018
Safidy malaza dia ny vokatra vita amin'ny hoditra. Na izany aza, zava-dehibe ny mieritreritra fa tsy mety amin'ny fotoam-pahamalinana mafana ny fitaovana matavy toy izany. Noho izany, ny fitafin'ny fahavaratra sy sarafana amin'ny 2018 avy amin'ny lamaody amin'ny lamaody hoditra dia singa iray amin'ny gardin-trano sy ny fandraharahana. Ny endriny malaza dia pensilihazo henjana amin'ny halavany matevina tsy misy akanjo. Raha misafidy safidy fiarovan-tena sy amam-pihetseham-po kokoa ianao, dia mendrika ny hipetraka amin'ny modely fohy amin'ny hack. Matetika no milentika amin'ny rambony ny felam-paingotra, mahavariana ny lakaoly sy ny fototra, na any aoriana na eo amin'ny tratra.
Dress summer dress 2018
Ny fahatsoram-po sy ny fahombiazan'ny sarinao dia hanasongadina tsara ny fitafiana maivana amin'ny fitaovana enti-matihanina. Ny tombony amin'ny vokatra chiffôna dia ny fahaizan'izy ireo. Ny akanjo tsara tarehy sy marevaka tsara dia tsara ho an'ny tsipika mahazatra sy ny tsipiky ny tora-pasika isan'andro. Sarafana amin'ny 2018 ny fironana lamaody - ny halavany sy ny fara-tampony, ny elatra manidina, ny tsara tarehy. Ao anatin'ireo tahiry ireo dia ny asymmetrie malaza, fatorana tsy mahazatra na ny tsy fisian'izy ireo, drafitra, tetezana plastika , be dia be ny halavany.
Sarafàna Summer 2018 Tendrombohitra
Amin'ny vanim-potoana mafana, ny vahaolana amin'ny tsipika lamaody dia ny fifehezana ny firaisana ara-nofo sy ny vehivavy. Ny iray amin'ireo fomba malaza indrindra hanamafisana ireo toetra ireo dia ny fifantenana ny akanjo mety. Ary ny kiraro fialantsasatra amin'ny 2018 miaraka amin'ny soroka misokatra - safidy tsara. Ireo fironana farany dia mikendry ny hampiavaka ny fahamaotinana sy ny toetrany amin'ny famolavolana modely. Noho izany, ny endrik'ireo metaly tena mahazatra dia manana lanja maoderina sy lava indrindra. Fa ny silhoueta dia mety henjana. Ary manampy ny effektnosti, manamboatra ny endriky ny koketa ny mpanakanto miaraka amin'ny fanodinana fohy.
Dressing amin'ny Summer miaraka amin'ny embroidery 2018
Ny fanapahan-kevitra maoderina amin'ny safidy momba ny fivalanana dia nanjary tsara tarehy sy sary hosodoko. Izany karazana fingotra izany dia mety amin'ny vokatra vita avy amin'ny tononkira manify sy malefaka - jeans, kavona, sehatra. Ireo sarafana mody amin'ny 2018 dia voaravaka amin'ny embroidery amin'ny loko, zavamaniry, biby ary geometrika. Ny safidy malaza dia ny vokatra ao amin'ny firenena. Ireo mpanamboatra lamaody dia mampiasa teknika roa fototra - ny ety sy ny hazo fijaliana. Ny embroidery dia afaka mameno ny akanjo amin'ny habe lehibe manerana ny lavany na laconic eo amin'ny sisin'ny lamosina, eo amin'ny koketa, paosy. Tena tsara tarehy sy mahomby ny mijery modely mamirapiratra miaraka amin'ny lamaody mamirapiratra.
Ny lamaody mody amin'ny sarimihetsika fahavaratra 2018
Ny fironana farany amin'ny fomba maoderina dia mitohy manaraka ny torolàlana mazava sy marefo. Raha ny marina, ny loko feno akanjo sy satry dia mifanaraka tanteraka amin'ny vanim-potoana mafana. Na izany aza, amin'ny fironana sy ny vahaolana amam-pitiavana am-pitiavana izay hanampy amin'ny fanamafisana ny maha-vehivavy sy ny hanamora ny sary. Ny klasika dia tsy misy very. Ary mba hanamafisana ny maha-izy azy sy ny maha-tokana azy, dia mendrika ny mipetraka amin'ny printy tsara sy ny tsikombakomba tsara. Avy amin'ny lamaody dia tsy mandeha ary manilika ny felan'ny palette tsy mitongilana. Nefa andeha hojerentsika ny sarimihetsika maoderina fanao amin'ny 2018:
White . Safidy tsara ho an'ny hafanana ny alokaloka mahazatra. Ankoatr'izany, io loko fotsy io dia azo ampiharina amin'ny toetr'andro ratsy, io fanapahan-kevitra io dia hanamafy ny halemem-panahy, ny fahazavana ary ny fomba amam-pihetseham-po.
Ao amin'ny loko pastel . Ny loko marevaka tsara amin'ny akanjo dia hahatonga ny sary ho vaovao sy mahafinaritra. Mifanaraka amin'ny fironana farany dia ny endriky ny lavender, mint, peach, mavokely, lokon'ny lokony.
Saturated monochrome . Ao amin'ny modely lamaody sy monochromatic amin'ny loko voajanahary mamiratra. Mena, maitso, manga ary mavo dia tsy mitovy amin'ny famirapiratana sy ny sata, eny fa na dia amin'ny ambaratonga matanjaka aza.
Black . Ao amin'ny fanangonana vaovao, ny tsipika iray dia maneho ny vokatra misy loko manga malaza. Ary na dia tsy mahomby amin'ny fafana aza ny fako toy izany, ny akanjo ivelany mainty dia hanampy foana ny endriky ny sary.
Akanjo maotina amin'ny voninkazo floral 2018
Ny fiheverana manokana dia nalaina tamin'ny fomba fijery vehivavy tao amin'ny loha-hevitra. Amin'ny vanim-potoana mafana, ity sary ity dia tena ilaina. Ny akanjo ivelany amin'ny voninkazo dia hanampy hafanana, am-pitiavana ary fanatsarana. Ny fotoam-pialan-tsasatry Sarafanin'ny 2018 dia fetran-java-maneno lehibe sy laconic miaraka amin'ny endriky ny sisin'ny vokatra. Amin'ny lamaody, na lehibe na kely. Manintona sy mamirapiratra ny fifangaroana mifanohitra amin'izany. Na izany aza, dia mety tsara sy maivana ny fanontam-pirinty. Ny famolavolana kanto dia matetika mifintina amin'ny vahaolana hafa - lohahevitra iray amin'ny voankazo, sary hosodoko iray.
Beach sarafana 2018
Ny akanjo fitafy vehivavy dia tena manan-danja tokoa ho an'ny fialan-tsasatra eny an-dranomasina. Na izany aza, tsy ny modely tsirairay dia mety amin'ny sary momba ny tora-pasika. Ny fahasamihafana lehibe amin'ny vokatra toy izany dia fitaovana voajanahary voajanahary. Ny vahaolana tsara indrindra dia landihazo sy lamba rongony. Safidy azo itokisana sy azo antoka dia ny safidy amin'ny akora fabrika. Ary mba hanampiana ny fahamendrehana sy ny fanatsarana ny endriny, hajao ny akanjo vita amin'ny seza na chiffon. Tokony hanaraka sy hanapaka ihany koa ny fikojakojana sy fankaherezana. Andao hizaha fanavaozana - sarimihetsika sarimihetsika 2018 amin'ny fahavaratra:
Shirt . Tena tsara ny modely amin'ny fanakatonana fanakatonana mafy. Ity safidy ity dia mora ny manala sy mitafy, izay tena tsara ho an'ny andro fialan-tsasatra. Ny lobanjon'ny lamaody dia aseho amin'ny fohy, sy ny lavany lava indrindra, mifanaraka, mivantana, A-endrika silhouette.
Transformer . Ny vokatra amin'ny fanovana ny famolavolana dia mifanaraka tanteraka amin'ny fironana ankehitriny. Ny mpanamboatra dia azo ampiasaina toy ny akanjo, akanjo, akanjo na pareo. Ankoatra izany, ny akanjo toy izany dia hamonjy teti-bola ary hanampy anao samy hafa isan'andro.
Fitaovana mamirapiratra . Mijery ny vokatra azo avy amin'ny famolavolana mamitaka sy mahomby. Ity safidy ity dia tsy misarika ny saina ho amin'ny vatana tsara tarehy sy mahafinaritra fotsiny, fa manampy ihany koa ny mampifanaraka ny akanjo fitondra amin'ny fandroana.
Sarafany Summer 2018 ho an'ny vehivavy feno
Ny ankizivavy manana tarehimarika ambony dia mila mifantina tsara amin'ny akanjo amin'ny lohataona, satria ny famoronana misokatra dia afaka mamantatra ireo fahadisoana rehetra izay nafenina tsara tao anatin'ireo tsipìka ririnina. Sarafan-tsakafo 2018 ho an'ny feno, lamaody any an-toerana izay mikendry ny endriny sy ny maha-vehivavy, dia hanampy amin'ny fanamafisana ireo hatsaran-toetra ary manelingelina ny fiheverana avy amin'ireo faritra misy olana. Ny safidy fandresena azo antoka dia modely misy tavy ambony, manamafy ny tsipika. Ny halavan'ny tena dia ny fitafiana midi.
Ny ankizivavy manana endrika mahafinaritra dia tsara kokoa ny misoroka ny loko printy amin'ny motif kely. Fa ny bozaka lehibe, ny tarehimarika geometrika sy ny fakana am-bavany dia ho vahaolana tsara. Mba hijerena akaiky kokoa ny maso, atsaharo ny loko maizim-borona. Raha toa ka tsy eo an-tsorok'ilay lehibe ny tsy fahampian'ny mainty dia misafidiana endritsoratra miaraka amin'ny tampony mainty sy jiro.
Sary mamy miaraka amin'ny Sarafan 2018
Ny akanjo mivelatra amin'ny lohataona dia safidy tsara ho an'ny sary amin'ny endrika. Ny karazana safidy samihafa dia hanampy amin'ny fisafidianana fomba fanao tsara isan'andro na amin'ny fotoana manokana. Noho ny firoboroboana ny fampifangaroana làlana maromaro amin'ny tsipika iray, ny akanjo lamaody dia mahafinaritra amin'ny sneakers sy sneakers, ny kiraro ho an'ny orinasa sy ny kiraro baolina, ny kapa misokatra ary ny sandam-pitiavana. Nefa andao hijery ireo vahaolana malaza indrindra:
Sary an'ny tanàna. Ny maimaimpoana maimaim-poana, denim sy marevaka amin'ny fialantsasatra mandritra ny fahavaratra amin'ny taona 2018 dia mijery tsara amin'ny kitapom-bala misy tanàna, maroloko mahazatra, kapa amin'ny sambon-tselatra sy ny kiraro.
Romantic style. Ho an'ny sary malefaka sy malefaka dia tsara fitondran-tena, asymmetrika ary manidina. Ampio io kofehy io dia mety ho kiraro amin'ny kiraro, kitapo miloko ary satroka lava be.
Business bow . Raha tsy voafetra ny fepetra henjana ny fehezan-dalàna momba ny akanjo, dia mameno tsara ny sary amin'ny kiraro sy ny lobaka mahazatra ny akanjo vita amin'ny hoditra na lambam-pandriana.
Teny an-dalana . Lovely chiffon sy môlekina tsara tarehy dia hiditra ao anatin'ilay sary maizimaizina. Amin'ity tranga ity dia mety amin'ny fehim-bolo, ny famolavolana lalina ary ny fisokafana, ny asymmetrika. Ny safidy tena izy dia raisina ary ny fomba amam-panao lamba.
Sarafany fohy amin'ny fahavaratra amin'ny 2018
Ny modely amin'ny fomba fohy dia lavorary ho an'ny andro mafana indrindra. Ny akanjo toy izany dia manampy amin'ny fanamafisana ny tongotra mamo sy ny kiraro kanto. Sarafany mahafinaritra ho an'ny fahavaratra amin'ny 2018 dia hahavita mameno ny tsipika mitaingina isan'andro miaraka amin'ny kiraro, satroka feno hatsia, sandals tsy mahazatra. Saingy raha toa ka misy karazana fohy lehibe ho an'ny tsipìkan'ny mpifankatia miaraka amin'ny satroka, kapa miaraka amin'ny fehiloha sy kiraro.
Sarin'ny andro fahavaratra mandritra ny fahavaratra 2018
Ny lamaody farany indrindra indrindra dia manantitrantitra ny maha-vehivavy sy ny hakantony. Ny fironana eo amin'ny lamaody any amin'ireo fanangonana farany dia mikendry ny hisintonana ny filaminana sy ny firaisana ara-nofo. Noho izany, mandritra ny fironana, lava lava miaraka amin'ny soroka misokatra sy ny lamosina, sombintsombin'ny lamosina, famolahana lalina. Ny taona fahavaratra sarafana amin'ny 2018 dia mahavita mandanjalanja tsara amin'ny solefany, sy ny kavina malefaka, ny kofehy vita amin'ny refy ary ny sehatra.
Tonta tsy misy akanjo 2016
Stylish manicure 2016
Modely kiraro 2018 - 50 sary avy amin'ireo mpivarotra mampiavaka indrindra amin'ny vanim-potoana vaovao
Sary hosodoko amin'ny fantsika 2014
Eustachiitis - soritr'aretina
Akanjo maoderina 2014
Nivoaka voalohany i Taylor Swift tao anatin'ny roa taona
Pestizia ho an'ny fanaraha-maso enta-mavesatra
Evan Rachel Wood dia niteny tao amin'ny Kaomity Fitsarana Amerikana ary niresaka momba ny antsipiriany momba ny fanolanana azy
Nihaona i Michael Trevino sy Nina Dobrev?
Ny tsy fitoviana - ny fahasambarana faharoa
Lady Gaga dia nividy trano vaovao ary ho tonga reny tokan-tena
Mipetraha amin'ny balan'ny reny 2015
Kylie Jenner no nanova tanteraka ny lokon'ny volony
Biography of Macaulay Kalkin